Castle Umakhi II |
Rabcat ngoku sityhile enye ukuya umdla ngonaphakade enqabeni yomkhosi umakhi slot lwabo, nge slot washo owawunesihloko Castle Umakhi 2. Lo mdlalo kuthiwa abe upgrade ukuba komanduleli yayo, kwaye, nakaninzi, iimpawu sandise inkokhelo yakho. Unako ukufunda ngakumbi ukufunda okungakumbi ngale slot.
Ukufunda More About Building Castles kwi machine slot yebhonasi free
Nge Castle Umakhi 2 unayo 3 imiqolo yetyu, 5 namacwecwe kunye 15 paylines esisigxina. Ufumana amanqanaba amabini kule free ibhonasi slot umatshini. Inqanaba lokuqala lubandakanya ukuba ukhetha yabalinganiswa ezintathu eziphambili. Aba ngabo Kwakhona abadumileyo kwinguqulelo wokuqala umdlalo.
Ekuqaleni, kulindeleke ukuba ukhethe enye abalinganiswa ababini, ezizezi USam Mandy. Xa kwinqanaba lokuqala sele kugqityiwe, umntu wesithathu phendla. Kwinqanaba lokuqala, kwakhona kuya kufuneka ukhethe indawo ukuqala ukusuka. A Imaphu iya kwenziwa ukuba ugqibe apho aqala.
Le slot has ezinye imiqondiso esezantsi-ixabiso eziquka isitena, zakhiwe, isileyiti namatye. Ii icon eliphezulu-ixabiso ziquka i bar segolide, isithsaba kunye nesifuba ubuncwane. Isantya apho wakha iinqaba zakho ziya kuba lixhomekeke kwinani combos awinileyo ukuba umhlaba nge icon athelekisekayo.
Wild Kwaye Wazibhangisa Iisimboli Yiba enkulu
In Castle Umakhi 2 uphawu Wild imelwe mhlawumbi Sam okanye Mandy. Oku kuya kuxhomekeka ngamnye ukhetha ukususela ekuqaleni komdlalo. Whichever icon zasendle ukhetha, kuya shintsha nye zonke iisimboli ukuba kunyuswe amathuba akho kokufika yokuzuza ezihamba kunye.
Ekuphela umqondiso kwindlela ekwazi ukuba endle abakwazi indawo, lo icon usichithachithe. Le icon Wazibhangisa uboniswa apha nje Free Spin icon Pink. Kufuneka wazi ukuba lo slot lokwakha yakho enqabeni livela kwicala lasekhohlo lomkhusane. i reel, kwelinye icala, lungabonakala kwicala lasekunene screen.
Nalo le bhonasi machine slot free, uya kugcwala 8 iigridi ukuba kuza kujongwa kwikona esezantsi ekhohlo-esandleni wakho udlala screen. Oku kwenziwa xa ufike ngokuphumelela combos. Njengoko iigridi sele bagcwalisa, Kwakhona yokwakha yakho nqaba iza kuba yinto eliphambili. kunye 8 grid egcwele, ukwakhiwa yakho inqaba ukuba umntu ke ngokupheleleyo.
Uya kwandula ukuba uthatyathwe usiwe kwindawo eyahlukileyo, apho uya kuqalisa enye ukwakhiwa enqabeni isimilo yakho ekhethiweyo. Xa zonke iinqaba kunokwenzeka ukuba umntu yakhiwe, uza ku